Saosy ao Sri Lanka ~ Journey-Assist - Fandaminana. Photo. Description. tsiro
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Sri Lanka » Masakan'i Sri Lanka » Saosy ao Sri Lanka
Tena "manitra" tokoa ilay firenena. Amin'ny vilia rehetra, fanaon'ny olona ny manampy be dia be ny isan-karazany anana sy zava-manitra. Eto azonao atao koa ny mifankafantatra amin'ny karazana saosy tsy dia be loatra, izay mety misy voankazo sy sôkômbra matevina, ary miaraka amin'izay koa, toy ny mahazatra any Sri Lanka, dia maranitra.
Inona ny saosy Sri Lankan
Saosy Sri Lankan dia ranom-boankazo vita amin'ny zava-manitra isan-karazany. Miompana amin'ny làlan-jotra sy / na lafin'antsona, misy fiantraikany amin'ny tsirony, mihamamiratra kokoa.
Ny saosy Sri Lankan dia mety ho mamy na maintso, ronono ary voatabia, sns. Afaka mifangaro izy ireo amin'ny lovia efa nomanina, ary ny fototry ny fanomanana azy.
Ny saosy malaza indrindra any Sri Lanka
Ny saosy malaza indrindra ao Sri Lanka dia azo antoka fa Curry Sauce! Matetika dia nasiana vary fotsy-masaka (Nasioka voatavo).
Ny fototry ny saosy dia karazana zava-manitra mahazatra (antsoina koa ny kari) sy ny fifangaroan-tsakafo, anana, legioma, na voankazo aza. Ny akora faran'izay be mpitia indrindra ao Curry dia: tongolobe, grama masala, ginger, bawang, coriander, chili ary zava-maniry isan-karazany.
Mandritra ny fiomanana, dia atody ao anaty menaka voanio ny fangaro. Rehefa avy roandro, fanosotra marikivy na crème, na ronono kakazo sy fenugreek dia ampiana ireo mifangaro. Ny rehetra mamono ny hafanana ambany.
Souse Tikka Masala
Sakaosy Tikka Masala
Tikka Masala dia saosy mafana mena mamirapiratra izay ahitana garamà masala, tongolobe, voankazo maitso, paoma maintso vaovao, tongolo, voaniho, zira, cilantro, dipoavatra mena, ranom-boasary ary turmeric.
Matetika ny akoho dia andrahoina amin'ny saosy Tikka Masala, indraindray miaraka amin'ny vary sy legioma.
Ny teny "garam" (garam) Ny “manafana ny vatana” dia zava-dehibe, satria ny zava-manitra mifangaro io fangaro io dia raisina ho mampitombo ny mari-pana ao amin'ny fanafody Ayurvedic.
Ny fifangaroana masera masala dia mety misy voamadinika, kanelina, kardamaly, katsila, komina, ravina, voanjo, mainty sy fotsy dipoavatra, fennel ary chili. Gara masala dia ampio amin'ny tsaramaso, tsiro, vary, saosy ary salady, ary koa ny mofomamy, dite sy zava-pisotro.
Sauce Mitikiri (Miti Kiri Souse)
Miti Kiri Sauce
Ny saosy Michikiri dia sôkôla matevina.
Ahoana no mahandro? Raiso ny pulp voaniho, nohosihosy, ary aiso ny paiso amin'ny afon-doha. Kôkômbra maitso matevina ihany no azo alaina amin'ny fitrandrahana voalohany. Miaraka amin'ny fikosehana aorian'izay, ny ronono dia miteraka fihenan-tsasatra bebe kokoa.
Ao amin'ny sôkôlà matevina dia misy tavy sy menaka be dia be, satria raisina ho safidy hafa hanosotra ny menaka mahazatra.
Sauce Lunumiris (Soko Lunu Miris)
Sakaosy Lunu Miris
Ao amin'ny fandrahoan-tsakafo eo an-toerana dia heverina na lovia eo an-daniny na salady.
Inona no ao anatin'ny sangan'asa? Coconut, tongolobe, trondro Maldivian maina, chili tany, sira sy ny ranom-boasary makirana. Atambohy ny zava-drehetra, atsofohy ary andrahoina amin'ny menaka voanio. Bon matsiro!
Sakaosy Mango Chutney
Izy io dia ampiasaina ho toy ny zava-manitra na toy ny saosy ary mifangaro ny lamin'asa lehibe na lovia amin'ny lafiny. Mety ho legioma izany, matetika misy voankazo. Tsiro mangidy sy masira manitra.
Chutney dia voaomana amin'ny fomba roa: mafana sy mangatsiaka. Ny fomba mafana dia mitaky fandrahoan-tsakafo, izay handany fotoana be dia be ny hitondrana ny akora rehetra (legioma na voankazo) mankany amin'ny mason-kena voatondraka homam-boninkazo, mifono hanina. Mangatsiaka - avy amin'ny voa vaovao, tany mankany an-tany feno voankazo na legioma, misy zava-manitra.
Ny akora malaza amin'ny chutney dia mango, hazo amamamy, mint ary coriander.
Ny zava-manitra lehibe amin'ny chutney: ny sira, ny dipoavatra, ny siramamy, ny ginger, ny turmeric, ny ranom-boasary.
Ilay lovia, izay vary masaka sy saosy isan-karazany (enina eo ho eo amin'ny iray mipetraka), dia manandrana tokoa
Ary toa atmosfera tena izy, ary tsiro io ary manankarena!
Notolorana vary aho ary nasiana lovia enina misy fantsom-bolafotsy samihafa ho azy .. Tsaroako fa misy ovy, voninkazo akondro, atody, voan-tany (tena mahafinaritra), tsaramaso maintso (sombin-tsary (toy ny tao amin'ny sary, mitovy)) zavatra hafa tsy mbola fantatra.
Ary izany rehetra izany amin'ny lovia misaraka manodidina ny vary nilatsahan'ny ranom-boasary fotsy miaraka amin'ny papadam.
Tena mahasosotra, matsiro! 😉